Isi okwu nke chepụtara - Okwu Foundation
Okwu Onye edemede
Ihe edere ederede onye edemede:
ỊCHỤRỤ NA DESTINY
Edere akwụkwọ a na Benoni B. Gattell n'oge etiti n'etiti afọ 1912 na 1932. Kemgbe ahụ, a na-arụ ọrụ ugboro ugboro. Ugbu a, na 1946, enwere ole na ole peeji nke agbanwebeghị ma ọ dịkarịa ala. Iji zere ikwugharị na mgbagwoju anya, ewepuchala akwụkwọ niile, esokwa m ọtụtụ ngalaba, paragraf na ibe.
Enweghị enyemaka, o doro anya na ọ ga-abụrịrị na ederela ọrụ ahụ, n'ihi na ọ na-esiri m ike iche echiche ma dee n'otu oge ahụ. Ahụ m ga-adị jụụ mgbe m chere na isiokwu ahụ dị na mpempe akwụkwọ ma họrọ okwu kwesịrị ekwesị iji wuo ụdị nke ụdị ahụ: ya mere, ana m ekele ya maka ọrụ ọ rụrụ. Ekwesịrị m ịnakwere ebe a ụdị ọrụ ndị enyi, ndị na-achọ ka a ghara ịkpọ aha ha, maka aro ha na enyemaka aka ha iji rụchaa ọrụ ahụ.
Ọrụ kacha sie ike bụ iji nweta okwu iji gosipụta ihe gbasara okwu a. Mgbalị m siri ike bụ ịchọta okwu na nkebi ahịrịokwu ndị kachasị mma ịkọwapụta ihe na àgwà nke ụfọdụ ihe ndị dị n'ime ụwa, na igosi mmekọrịta ha na-enweghị ike ịchọta onwe ha n'ime ahụ mmadụ. Mgbe m gbanwee oge m mesịrị mezie na okwu eji mee ihe a.
Enweghi otutu ihe ndi ozo dika m ga acho ka ha di, ma mgbanwe a ga-ezu ma o bu na enwegh i agwụ agwụ, n'ihi na n 'akwukwo nke ozo di ka ihe kwesiri.
Anaghị m atụ anya ime nkwusa nye onye ọ bụla; Anaghị m ewere onwe m onye nkwusa ma ọ bụ onye nkụzi. A sị na ọ bụghị na m nwere akwụkwọ maka akwụkwọ a, m ga-ahọrọ ka a ghara ịkpọ aha m dịka onye dere ya. Ịdị ukwuu nke isiokwu ndị m na-enye ozi, na-egbochi ma na-egbochi m onwe m ma na-egbochi arịrịọ nke obi umeala. Enwere m ike ikwu okwu dị iche iche na nke na-awụ akpata oyi n'ahụ na onye na-adịghị anwụ anwụ nke na-adịghị anwụ anwụ bụ nke dị n'ime ahụ mmadụ ọ bụla; ma ana m ejighị n'aka na onye ahụ ga-ekpebi ihe ọ ga-eme maọbụ na agaghị ejikọ ya na ozi ahụ.
Ndi mmadu cheghariri uche ekwusiri ike na odi nkpa ikwu okwu banyere ihe omumu m na onodu di iche iche, na ihe omumu nke ndu m nke nwere ike inye aka ighota ot'esi me ka m mara na ide ihe banyere ya ọdịiche na nkwenkwe ndị dị ugbu a. Ha na-ekwu na nke a dị mkpa n'ihi na ọ dịghị akwụkwọ ọhụụ na-agbakwunyere, ọ dịghịkwa ederede ọ bụla e nyere iji gosipụta okwu ndị a n'ime. Ụfọdụ n'ime ahụmahụ m adịghị ka ihe ọ bụla m nụrụ ma ọ bụ gụọ. Echiche m banyere ndụ mmadụ na ụwa anyị bi n'ime ya egosipụtara m isiokwu na ihe ịtụnanya na achọtaghị m na akwụkwọ. Ma, ọ ga-abụ ihe ezi uche na-adịghị na ya iche na okwu ndị dị otú ahụ nwere ike ịbụ, ma ndị ọzọ amaghị. A ghaghi inwe ndi mara ma ha aputaghi. Enweghị m nkwa nke nzuzo. Enweghị m ụdị ọ bụla. Anaghị m enwe okwukwe na ịkọ ihe m chọtara site n'iche echiche; site n'iche echiche mgbe niile mgbe ị na-amụ anya, ọ bụghị na ụra ma ọ bụ n'iche. Enweghi m ma ọ bụ na ọ dịghị mgbe m ga-achọ ịnọ n'ụdị ụdị ọ bụla.
Ihe m maara mgbe m na-eche banyere isiokwu ndị dị ka ohere, mpaghara nke okwu, iwu nke okwu, ọgụgụ isi, oge, akụkụ, ihe e kere eke na ntụgharị nke echiche, ga-amasị m, emeghewo oghere maka nyocha na njigide n'ọdịnihu . N'oge ahụ, omume ziri ezi kwesịrị ịbụ akụkụ nke ndụ mmadụ, ma na-agbaso ihe sayensị na mmepụta. Mgbe ahụ, mmepeanya nwere ike ịga n'ihu, na nnwere onwe na ibu ọrụ ga-abụ ịchị ndụ nke onye ọ bụla na nke Gọọmentị.
Nke a bụ ihe osise nke ahụmahụ m n'oge m bụ nwata:
Afọ iri na ụma bụ mmetụta mbụ m nwere na njikọ ụwa a. Mgbe e mesịrị, enwere m mmetụta n'ime ahụ, m wee nụ olu. M ghọtara ihe ụda olu ndị ụda ahụ pụtara; Ahụghị m ihe ọ bụla, mana m, dị ka mmetụta, nwere ike ịghọta okwu nke okwu ọ bụla-ụda e gosipụtara, site na ụda; na mmetụta m nyere ụdị na agba nke ihe ndị a kọwara site na okwu. Mgbe m nwere ike iji echiche nke ịhụ ihe ma hụ ihe, achọpụtara m ụdị na ọdịdị nke m, dị ka mmetụta, chere, na-ekwenye nkwekọrịta na ihe m jidere. Mgbe m nwere ike iji uche nke anya, ịnụ ihe, uto na isi ísì ma nwee ike ịjụ ma zaa ajụjụ, achọpụtara m na m bụ onye ala ọzọ n'ụwa. Amaara m na abụghị m ahụ m bi na ya, ma ọ dịghị onye nwere ike ịgwa m onye ma ọ bụ ihe m bụ ma ọ bụ ebe m si bịa, ọtụtụ n'ime ndị m jụrụ ajụjụ yiri ka hà kwenyere na ha bụ ahụ ha bi.
Aghọtara m na m nọ n'ahụ nke m na-enweghị ike ịhapụ onwe m. Etufuru m, naanị m, na ọnọdụ mwute nke mwute. Ihe ndị merenụ ugboro ugboro mere ka m kwenyesie ike na ihe adịghị otú ha dị; na enwere mgbanwe na-aga n'ihu; na ọ dịghị adịgide adịgide nke ihe ọ bụla; na ndị mmadụ na-ekwukarị ihe dị iche n'ihe ha chere n'ezie. Playedmụaka gwuru egwuregwu ha kpọrọ "mee-kwere" ma ọ bụ "ka anyị mee ka à ga-asị na ha mere." Playedmụaka na-egwuri egwu, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-eme ka ndị kwere na ihe ọ bụla ha chọrọ; e jiri mmadụ ole na ole ekwu eziokwu ma nwee obi eziokwu. Ekwofu na mgbalị mmadụ, na-adịghị anya. Emeghị ka ọdịdị ahụ dịruo ogologo oge. Ajụrụ m onwe m: Olee otu esi eme ihe nke ga-adịgide, ma mee n'enweghi nsogbu na aghara? Akụkụ ọzọ nke m zara, sị: Nke mbụ, mara ihe ị chọrọ; lee ma jiri nwayọ buru n'uche ụdị nke ị ga-enweta ihe ị chọrọ. Mgbe ahụ chee echiche ma mee ma kwuo nke ahụ na ọdịdị, yana ihe ị chere ga-achịkọta site na ikuku adịghị ahụ anya ma dozie ya na gburugburu ya. Echeghị m echiche na okwu ndị a, mana okwu ndị a na-egosipụta ihe m chere na mgbe ahụ. Enwere m obi ike na m nwere ike ime nke ahụ, ma nwaa ma nwaa ogologo oge. M dara. Mgbe m dara ada, ihere gwụrụ m, ihere mekwara m.
Enweghị m ike inye aka n'ilekọta ihe omume. Ihe m nụrụ ka ndị mmadụ na-ekwu banyere ihe mere, karịsịa banyere ọnwụ, ọ dị ka ihe ezi uche dị na ya. Ndị mụrụ m bụ Ndị Kraịst nwere obi eziokwu. Anụrụ m ka ọ gụrụ ma kwuo na Chineke kere ụwa; na o kere mkpụrụ obi na-adịghị anwụ anwụ maka ahụ mmadụ ọ bụla n'ụwa; nakwa na mkpụrụ obi ahụ nke na-erubereghị Chineke isi ga-atụba ya na hel ma kpọọ ọkụ na brimstone ruo mgbe ebighi ebi. Ekwetaghị m okwu nke ahụ. O yiri ihe nzuzu ka m chee ma ọ bụ kwere na Chineke ọ bụla ma ọ bụ ịbụ onye nwere ike ime ụwa ma ọ bụ kee m maka ahụ m bi. Enwere m mkpịsị aka m na njirisi brimstone, ekwenyere m na a ga-akpọ ozu ahụ ọkụ; ma amaara m na m, ihe m maara dị ka m, enweghị ike ọkụ ma ghara ịnwụ, na ọkụ na brimstone apụghị igbu m, ọ bụ ezie na ihe mgbu nke ọkụ ahụ dị egwu. Enwere m ike ịhụ ihe ize ndụ, ma atụghị m ụjọ.
O yiri ka ndị mmadụ amaghị 'ihe mere' ma ọ bụ 'ihe', banyere ndụ maọbụ banyere ọnwụ. Amaara m na e kwesịrị inwe ihe kpatara ihe niile mere. Achọrọ m ịmata ihe nzuzo nke ndụ na ọnwụ, na ịdị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Amaghị m ihe kpatara ya, ma enweghi m ike inyere aka. Amaara m na a gaghị enwe abalị na ehihie na ndụ na ọnwụ, ọ dịghịkwa ụwa ọ bụla, ọ gwụla ma e nwere ndị maara ihe na-achị ụwa na abalị na ehihie na ndụ na ọnwụ. Otú ọ dị, ekpebisiri m ike na nzube m bụ ịchọta ndị maara ihe bụ ndị ga-agwa m otú m kwesịrị isi mụta na ihe m kwesịrị ime, ka e nyefee gị ihe nzuzo nke ndụ na ọnwụ. Agaghị m eche banyere ikwu nke a, mkpebi siri ike m, n'ihi na ndị mmadụ agaghị aghọta; ha ga-ekwere na m bụ onye nzuzu ma ọ bụ ara. Adị m ihe dị ka afọ asaa n'oge ahụ.
Afọ iri na ise ma ọ bụ karịa gafere. Achọpụtala m echiche dị iche na ndụ ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ, ka ha na-eto ma na-agbanwe n'ime ndị nwoke na ndị inyom, karịsịa n'oge ha bụ nwata, ma karịsịa nke nke m. Echiche m gbanwere, ma nzube m - ịchọta ndị maara ihe, ndị maara, na ndị m nwere ike ịmụta ihe nzuzo nke ndụ na ọnwụ - agbanweghị. M maara na ha dị adị; ụwa enweghị ike ịbụ, na-enweghị ha. N'ihe n'usoro ihe omume, enwere m ike ịhụ na enwere ọchịchị na njikwa ụwa, dịka a ghaghị inwe gọọmentị mba ma ọ bụ njikwa nke azụmahịa ọ bụla maka ndị a ka ha gaa n'ihu. Otu ụbọchị mama m jụrụ m ihe m kweere. Enweghị m oge ọ bụla m kwuru, sị: Amaara m na ikpe ziri ezi na-achịkwa ụwa, ọ bụ ezie na ndụ m yiri ka ọ bụ ihe akaebe na ọ bụghị, n'ihi na enweghi m ike ịme ihe m maara nke ọma, na ihe m chọrọ.
N'otu afọ ahụ, n'oge opupu ihe ubi nke 1892, agụrụ m na Sunday akwụkwọ na otu onye Blavatsky bụ nwata nke ndị maara ihe n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ nke a na-akpọ Mahatmas; na site na ndu ugboro ugboro n'elu uwa, ha enwetazu amamihe; na ha nwere ihe nzuzo nke ndụ na ọnwụ, nakwa na ha kpatara Madam Blavatsky ka ha ghọọ Theosophical Society, nke ga-esi n'aka ha nye ndị mmadụ ohere ha. A ga-enwe nkwurịta okwu na mgbede ahụ. M gara. Ka oge na-aga, abụrụ m onye isi nke Society. Nkwupụta ahụ bụ na e nwere ndị maara ihe - site n'aha ọ bụla ha kpọrọ - ọ bụghị ihe ijuanya m; nke ahụ bụ nanị okwu ọnụ nke ihe m ji n'aka na ọ dị mkpa maka ọganihu nke mmadụ nakwa maka nduzi na nduzi nke okike. M na-agụ ihe niile m nwere ike banyere ha. Echere m na m ga-abụ nwa akwụkwọ otu n'ime ndị maara ihe; ma ịnọgide na-eche echiche mere ka m ghọta na ụzọ dị adị abụghị site na ngwa ngwa ọ bụla onye ọ bụla, kama ka m dabara na njikere. Ahụghị m ma ọ bụ nụ site na ya, ma ọ bụ na enweghi m mmekọrịta ọ bụla, 'ndị maara ihe' dị ka m tụrụ ime. Enweghị m onye nkụzi. Ugbu a enwere m nghọta nke ọma banyere ihe ndị dị otú ahụ. Ezigbo 'ndị maara ihe' bụ ndị nke atọ, na-adịgide adịgide. M kwụsịrị njikọ na obodo niile.
Site na November nke 1892 m gafere ọhụụ magburu onwe ya, na-esote, n'oge opupu ihe ubi nke 1893, ọ bụ ihe kachasị njọ na ndụ m. Agafewo m 14th Street na 4th Avenue, na New York City. Ụgbọala na ndị mmadụ na-eme ngwa ngwa. Ka m na-esite na steepụ na-aga n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ, Ìhè, karịrị nke ọtụtụ puku anyanwụ meghere n'etiti etiti m. Na oge ahụ ma ọ bụ oge, ejidere ebighi ebi. Oge adịghị. Anya na akụkụ abụghị ihe akaebe. A na-agụnye ọdịdị nke nkeji. Amaara m nkeji nke okike na nkeji dịka ọgụgụ isi. N'ime na karia, ya mere ịsị, e nwere ìhè dị ukwuu ma dị ntakịrị karị; nke ka ukwuu na-ekpuchi obere Mpempe ọkụ, nke kpugheere ụdị dị iche iche. Ìhè ahụ abụghị nke okike; ha bụ Ìhè dị ka Intelligences, Ìhè Na-amụba. N'iji ya tụnyere ìhè ma ọ bụ ìhè nke ìhè ndị ahụ, ìhè anyanwụ gbara gburugburu bụ nnukwu oji. Na na na site na Mkpụrụ na ogwe na ihe niile m maara banyere Ebe Ịmara. Amaara m Amamihe dịka Ezigbo Nzuzo na Eziokwu zuru oke, ma mara ihe jikọrọ ihe. Enweghị m obi ụtọ, mmetụta, ma ọ bụ obi ụtọ. Okwu napughi ịkọwa ma ọ bụ kọwaa NKWAKWU. Ọ ga-aba uru ịnwale nkọwa nke ịdị ebube dị ebube na ike na n'usoro na nkwurịta okwu banyere obi ụtọ nke ihe m maara mgbe ahụ. Ugboro abụọ n'ime afọ iri na anọ sochirinụ, ruo ogologo oge na oge ọ bụla, amaara m nke ọma. Ma n'oge ahụ, amaghị m ihe ọ bụla karịa m maara n'oge ahụ.
Ịmata Amamihe bụ usoro nke okwu ndị m họọrọ dịka ahịrịokwu iji kwuo banyere oge kachasị dị egwu ma dị ịrịba ama nke ndụ m.
Amamihe dị na mpaghara ọ bụla. Ya mere, ọnụnọ nke Ịma Ọhụụ na-eme ka onye ọ bụla nwee ike ịmara ya dịka ọrụ ọ na-arụ na ogo nke ọ maara.
Ịmara ihe ọmụma na-ekpughe onye 'amaghị' onye ahụ maara nke ọma. Mgbe ahụ, ọ ga-abụ ọrụ nke onye ahụ iji mee ka amara ihe ọ nwere ike ịmara banyere Ịmara.
Ezigbo uru n'inweta Amamihe bụ na ọ na-enyere mmadụ aka ịma banyere isiokwu ọ bụla, site na iche echiche. Iche echiche bu nchikota nke Conscious Light n'ime okwu nke echiche. N'ikwu ya nkenke, iche echiche bụ nke anọ: ịhọrọ isiokwu ahụ; na-ejide Light Conscious on the subject; na-elekwasị anya Ìhè ahụ; na, na-elekwasị anya nke Ìhè. Mgbe a na-elezi Ìhè, a maara isiokwu ahụ. Site na usoro a, Echewo Echiche na Ntuchi.
Ebumnuche pụrụ iche nke akwụkwọ a bụ: Iji gwa ndị mmadụ na ha bụ ndị mmadụ na-enweghị ike ịnwụ anwụ, Triune Selves, bụ ndị, na n'ime oge ma ọ bụ oge, biri na ndị na-eche echiche na akụkụ ndị maara ihe na anụ ahụ zuru okè ke Obio Ub o ¯ n; na anyi, ndi mmadu nwere onwe anyi ugbu a n'uwa mmadu, dara n'ime ule di oke mkpa, wee si na ya wepuo onwe ayi site na ebe obibi nke Permanence n'ime nwoke na nwanyi a nke uwa na omuma na onwu; na anyị enweghị ncheta nke a n'ihi na anyị na-etinye onwe anyị n'ụra onwe onye hypnotic, na nrọ; na anyị ga-anọgide na-atụ nrọ site na ndụ, site na ọnwụ ma laghachi azụ na ndụ; na anyị ga-anọgide na-eme nke a ruo mgbe anyị na-akwachasị, teta, onwe anyị pụọ na hypnosis nke anyị na-etinye onwe anyị; na, oge ọ bụla ọ na-ewe, anyị ga-eteta n'ụra anyị, mara onwe anyị dị ka onwe anyị n'ime ahụ anyị, wee mee ka ahụ anyị dịghachi ndụ ruo mgbe ebighi ebi n'ụlọ anyị - The Permanence from which we came - which na-ejupụta ụwa a nke anyị, ma anya mmadụ anaghị ahụ ya anya. Mgbe ahụ, anyị ga-eji nlezianya were ebe anyị ma nọgide na akụkụ anyị na Ọdịnihu nke Ọganihu. E gosiputara ụzọ iji mezuo nke a n'isiakwụkwọ ndị na-eso.
N'akwụkwọ a ide ihe odide nke ọrụ a bụ onye nbipute. Enwere obere oge ịgbakwunye ihe e dere. N'ime ọtụtụ afọ nke nkwadebe ya, a na-ajụkarị m ka m tinye n'ime ederede ụfọdụ nkọwa nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị yiri ihe na-apụghị ịghọta aghọta, ma, nke ihe ndị e kwuru na ibe ndị a, dị mkpa ma nwee ihe ọ pụtara, nke , n'otu oge ahụ, nkwupụta okwu ndị dị na ọrụ a. Ma, ọ bụ m ka m na-atụle ma ọ bụ na-ede akwụkwọ. Achọrọ m ka a kpee ọrụ a naanị maka ọdịmma ya.
N’afọ gara aga azụrụ m mpịakọta nke nwere Akwụkwọ Lost Books nke Akwụkwọ Nsọ na Akwụkwọ Ichezọ Iden. Na inyocha peeji nke akwụkwọ ndị a, ọ bụ ihe ịtụ n’anya ịhụ ka esi ghọta ọtụtụ akụkụ dị iche iche na nke ọzọ a na-apụghị ịghọta aghọta mgbe mmadụ ghọtara ihe edere n’ime ya gbasara Onwe-ato nke Atọ na akụkụ ya atọ; banyere imu ohuru nke aru nke aru rue aru zuru oke, anwughi anwu, na ala eze ebighebi, nke n’okwu Jisos bu “ala eze Chineke”.
A rịọkwara arịrịọ ọzọ iji kọwaa amaokwu Bible. Ikekwe ọ dị mma na a ga-eme nke a nakwa ka ndị na-agụ echiche na ọdịda nyere ụfọdụ ihe akaebe iji kọwaa ụfọdụ okwu dị n'akwụkwọ a, bụ ihe àmà nwere ike ịchọta ma Agba Ọhụụ na akwụkwọ ndị a kpọtụrụ aha. Ya mere, m ga-atụkwasị akụkụ nke ise nke isi nke X, Chi na okpukpe ha, na-eme ihe ndị a.
Gaa n'ihu Okwu Mmalite ➔